ADY AMIN’NY TSY FANARAHAN-DALANA :: Hanara-maso ny taksiben’Ivato ny kaominina, Zandary, minisitera • AoRaha
ADY AMIN’NY TSY FANARAHAN-DALANA Hanara-maso ny taksiben’Ivato ny kaominina, Zandary, minisitera
Miha henjana ny tady. Hanatanteraka fanaraha-maso ny taksiben’Ivato ny avy ao amin’ny kaominina Ivato sy ny Zandarimariam-pirenena ary ny minisiteran’ny Fitaterana. “Manoloana ny fitarainan’ny mpandeha amin’ireo taksibe ireny dia mitohy ny hetsika. Ny eto amin’ny kaominina dia tsy mitsahatra manenjika ireo tsy manara-dalàna ary manasazy azy ireo. Miditra amin’ny sehatra ambonimbony kokoa ny hetsika, ankehitriny satria tonga eto ny avy ao amin’ny Zandarimaria sy ny mpiara-miasa aminy hatrany amin’ny Pôlisim-pirenena manampy tosika. Tsy ho an’Ivato irery fa hatramin’ny manodidina noho ny tsy fanajan’ireo taksibe ireo ny mpandeha. Hamerenana amin’ny laoniny ny fitateram-bahoaka izany rehetra izany”, hoy lefitry ny Ben’ny tanànan’Ivato, Rakotosolo Albert.
Mampitaraina ny mpandeha ny fomba fiasan’izy ireo, toy ny fandraisana olona amin’ny tsy fiantsonana sy ny tsy fanajana ny mpandeha fa indrindra ny fihodinana an-dalana izay tsy tonga amin’ny fiantsonana farany. Henjana ny sazy miandry ireo tsy manara-dalàna. Fampidirana trano fihibohana ny fiara sy fisintonana ny taratasy fahazoan-dalana mamily fiarakodia eny amin’ny mpamily no sazy hampiharina amin’ireo fitateram-bahoaka mampitohy an’Ivato amin’i Vassacoss tsy manaja izay voarakitra ao anatin’ny bokin’andraikitra.
“Misy hetsika atao manomboka androany (Ndrl:omaly) ady amin’ny fiverenana an-dalana ataon’ny taksibe sy ady amin’ny tsy fanajana ny fiantsonana ary ny fitohanana ataon’ny taksiben’Ivato. Raha misy fandikana ireo zavatra ireo, fepetra noraisina, dia ny fampidirana trano fihibohana avy hatrany”, raha ny fanamafisan’ny mpandrindra ny “Cellule d’intervention routière” na CIR eo anivon’ny minisiteran’ny Fitaterana.
Marihina fa mahatratra efajato ireo taksibe manao fitaterana mampitohy an’Ivato sy Vassacoss izay mivondrona anaty kaoperativa telo.
FANOVANA FOMBA FIASA :: Hisy ny fitaovana vaovao hiatrehana ny loza voajanahary